Vhura mhinduro sosi yekudzivirira DDoS kurwisa | Linux Vakapindwa muropa
Nezvikonzero zvisina basa mune ino blog, muArgentina nezuro pakanga paine hurukuro zhinji pamusoro pekuparadzirwa kwekuramba basa (DDoS) kurwiswa Icho chikonzero senge chero chipi zvacho kutaura nezve idzi mhando dzekurwiswa dzinogona kukanganisa chero munhu ane webhusaiti uye yakavhurika sosi mhinduro dzekudzikamisa.
1 DDoS kurwisa
2 Vhura mhinduro sosi yekudzivirira DDoS kurwisa
Kurambidzwa kwekuparadzaniswa kwekurwiswa kwebasa ndechimwe chezvinhu zviri nyore kuita sezvo zvisingade ruzivo rwakawanda rwehunyanzvi, asi panguva imwechete iyo ndeimwe yezvinonyanya kukuvadza sezvo inogona kutora masevhisi edhijitari uye mawebhusaiti pasina kana maawa kana mazuva.
Munguva yerudzi urwu rwekurwisa, iye akabatwa anotambura nekuzadzwa kwenetiweki yake nemaseva ane huwandu hwakawanda hwezvikumbiro zvekuwana izvo zvakakura pane izvo zvivakwa zvakagadzirirwa kubata. Izvi zvinotungamira kune vanoshandisa zviri pamutemo vanononoka kuwana kana kusakwanisa kupinda zvakananga.
Kudzora kurwiswa, mutadzi anofanirwa kuve nekwaniso kune network yezvigadzirwa (kazhinji pasina ruzivo rwevaridzi) Aya majaira anogona kuve ese ari maviri makomputa uye nhare kana Internet yezvinhu zvishandiso. Izwi rakagoverwa muzita rekurwiswa rinouya kubva kune izvo zvikamu zve netiweki hazviwanzo munzvimbo imwechete yenzvimbo.
Kudzora kwechigadzirwa kunoitwa kuburikidza nemarware, zvemagariro enjiniya maitiro, kana kushandiswa kwepassword passwords kuti vashandisi havana kunetseka kuchinja.
Hukuru hweiyi botnet hunogona kusiyana kubva padiki padiki diki yezvigadzirwa kusvika kumamirioni acho. Chero hupi saizi, maitiro acho akafanana chero zvakadaro. Matsotsi anotarisira botnet anogona kunongedza iyo inogadzirwa webhu traffic kune chakanangwa uye kuita DDoS kurwisa.
Nekudaro, usatende kuti chero kukanganiswa kana kusashanda kwewebhu webhu imhosva yekurwisa. Dzimwe nguva huwandu hwevashandisi vepamutemo vanoda kuwana panguva imwe chete hunopfuura izvo zvivakwa zvinogona kutsigira. Zvinoitika semuenzaniso nekutengeswa kwematikiti emitambo yakakosha kana mashoma-nguva zvinopihwa.
Mune ino yekupedzisira kesi, kusagadzikana kunowanzo kungotora kwenguva yakati.
Kupfuura izvozvo sevashandisi veInternet, yega yega inova nebasa rekushandisa kunoitwa nemidziyo yedu, Kune akawanda server-level mhinduro dzinogona kushandiswa kudzivirira uye kudzikisira idzi mhando dzekurwisa. Uye, akati wandei ayo akavhurwa sosi.
Ndicho script ine simba izvo zvinoenderana netstat p yekurairaIyo inobvumira kuvharira kurwisa nekutsvaga uye kuongorora iyo IP kero iyo inosangana kune server.
-Automatic ichivharira IP kero
-Traffic dema uye chena zvinyorwa uye kwazvinobva
-Easy ziviso uye manejimendi kune network vatariri
-Automatic kuona kwemitemo inosanganisirwa neIptable uye epamberi mutemo firewalls
-Automatic email yambiro
-Kuramba kwekubatana kusingadiwe uchishandisa tcpkill
-Iyo chirongwa inowanikwa munzvimbo dzekuchengetera ese server kugoverwa.
Zvimwe tool iyo inouya muzvinyorwa zvekuparadzirwa kweseva.
Izvo zvinobatsira kwazvo kuziva uye kurambidza masosi enjodzi DDoS traffic. Chirongwa ichi chinotarisa mafaera erog uye chinoratidza kubatana kunofungidzira uye mapatani kuitira kuti zvinyorwa zvisvike kugadzirwa. Kuishandisa kunoderedza zvisiri pamutemo uye zvisirizvo chokwadi chekuedza kuedza nekuda kwekushandisa kwemasimba mamodule ane akasiyana masimba.
-Inopa mhando mbiri dzekuongorora; yakadzika uye log mafaira
-Records yenguva yenguva inosanganisirwa neinobva IP traffic
-Iyo inosangana mune yevatengi-server dhizaini
-Inobvumira kugadzirisa akasiyana masevhisi, kusanganisira sshd, vsftpd uye Apache
-Easy kumisikidza kwemaneja
-It inowirirana zvose Firewall
-Access mvumo uye kurambidzwa zvinogona kugadzirwa zvinoenderana IP kero
-Iye zvinokwanisika kuvhara zvechisimba simba kurwisa
-Inobvumira kuvharwa kwe IP kero zvichienderana nenguva dzenguva
-It inotsigira SSH-yakavakirwa nharaunda
HaProxy inoshanda neimwe nzira. Izvo hazvisi chete zvinoenderana neIP kero kuona asi zvakare pakuenzanisa iyo sevha basa rebasa.
-Ungavhara traffic zvichienderana nebandwidth yekushandisa.
-Iyo inogadzira otomatiki matafura evatema uye machena zvinyorwa zveIPs zvainovaka zvichibva pamitemo yakamisikidzwa mukugadziriswa kwayo.
-Iyo inogona kuona zvishandiso zvemidziyo, ichiita kuti ibudirire pakurwisa DDoS.
-Inotendera iwe kudzivirira akasiyana marudzi ekurwiswa uye kudzikisira kubatana.
Ehezve, neizvi hatipedze nyaya. Chinhu chakanakisa ndechekuti kana iwe uine webhusaiti, tarisa kune wako wekutambira mupi nezve akanyanya matanho ekuzvidzivirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vhura mhinduro sosi yekudzivirira DDoS kurwisa
Mhoro! Uye zvakadii nezveCDN mhinduro senge iyo inopihwa neCloudflare?
Yakanga isiri chikamu chechikumbiro chechinyorwa, asi sekuziva kwangu chinoshanda zvakakwana.
Gabriel peralta akadaro
Anogona ese matatu kushandiswa panguva imwe chete? Pane maseva angu ini ndinogara ndichishandisa fail3ban
Pindura kuna Gabriel Peralta
Kutaura chokwadi, ini handina zano.
10% yeLinux kernel yatove ... AMD nharaunda